Nlekọta ụlọ maka zlar pelargonium: gịnị ka aha ahụ pụtara, na-eto - Osisi - 2020
Pelargonium zonal (Pelargonium zonale) - nkọwa
Zones mara mma nke pelargonium bụ nke ụlọ osisi mara mma nke na-achọ mma ọ bụghị naanị ụlọ, kamakwa ọfịs. Ikike ntoju nke ọnwa isii, akwụkwọ ahịhịa, unpretentiousness na nlekọta ahụ mere ka ọ bụrụ ọkacha mmasị n'ụwa niile.
Pelargonium zonal (Pelargonium zonale) - ụdị ifuru ji achọ mma na ezinụlọ a bụ
Mpaghara geranium (zonale) bụ onye nnọchi anya ezinụlọ Geraniev, nwere ndị nnọchite anya karịrị narị anọ. N'elu anya, ha na-eme ka ha yieghị ihe ọdịnala ime obodo a maara nke ọma.
Pelargonium bụ akụkụ zones
Nkọwa dị mkpirikpi ihe kpatara eji kpọọ ya, akụkọ mmalite ma ọ bụ nhọrọ
Omenala ahụ si Africa bịa, ọ batara na mpaghara Europe na narị afọ nke iri na asaa. Ndị na-azụ nwa Dutch nọ na-azụ nwa, na-ekele nke ọtụtụ ụdị pụtara.
Pelargonium agbasara ngwa ngwa gaa n'ụlọ akwụkwọ ndụ nke ndị na-anakọta ma na ogige ubi. Njirimara ụdị nke ihe ọkụkụ ahụ mechara belata, mana nsonaazụ nke ọrụ ozuzu bụ obere oge ya na ụcha ọcha.
Dị Mkpa! Omenala juru ebe niile n’ụwa niile. Taa a toro ya n’ime ụlọ ma kụọ ya iji chọọ ebe ndị ọ chọrọ ịga akwụkwọ.
Pelargonium zonal - gịnị ka ọ pụtara? Aha a bilitere n'ihi agba ụcha pụrụ iche nke nwere agba gbara ọchịchịrị. Ọ bụ brownish, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, odo odo, ụda burgundy na chocolate.
Nkebi nke abụọ a na-arụ dị ka nha nke osisi:
ụdị obere - na-eto ruo 13 cm;
ịdị elu nke etiti - ruo 60 cm;
toro ogologo to 80 cm.
Ubi a na-akpọ Pelargonium
Ulo di iche-iche nke ahihia n’ime ha nwere aha di iche
Ọrụ mgbe nile nke ndị na-azụ nwa na-enye gị ohere ịhọrọ ụdị pelargonium nke kachasị mma maka ọnọdụ ụfọdụ. Isi ihe dị iche n'etiti okooko osisi - na nha, ụdị nke inflorescences na agba nke petals.
Pelargonium Tuscany na ụdị ya Edwards, Bernd na ndị ọzọ
Ọ bụ ọkọlọtọ nke na-enwe steepụ kwụ ọtọ na nke ọkara. Ọdịdị mkpuchi olu mkpuchi nke ekara Terry, kama okomoko. Pelargonium Yu Jiga masịrị ya na ịma mma ya ọ bụla hụrụ ebe obibi osisi.
Ihe e ji mara ya bụ na enweghị nkọwa ya, inflorescences bụ akụkụ gbara ya gburugburu, salmon buds, nke okpo ya na-adị ka ọkụ karịa n'ọnụ ọnụ. Osisi gbara agba nwere agba aja aja, ohia tozuru oke.
Ejiri mara ya n’ọdịdị dị larịị na ịdị elu nke ruru cm 30. Kwesịrị ekwesị maka idobe ụlọ, loggias na ifuru. Mkpụrụ osisi Terry bụ milky, oroma, piich, uhie. Na nso nso a bred na adịkarịghị hụrụ na ahịa. Na-anabata ọnọdụ oyi na oge oyi.
Attentionaa ntị! Ọ bụrụ na a na-elekọta osisi ahụ nke ọma, mgbe ahụ buds ga-etolite n'afọ niile.
Pelargonium Raphael F1
Oke ọla edo
Ọ na-akụ n'èzí na ụlọ. Ejiri mara oke okooko. Akwụkwọ ya nwere agba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọcha nwere mgbanaka ndo aja aja dị n'etiti. Buds na-acha odo odo na uhie.
Minx na ndi ozo
Pelargonium nke Lara Harmony nwere nnukwu ifuru nwere oke osisi, ya na otutu ihe nchekori nke udi nchedo ebili site na mmalite nke oge opupu ihe ubi wee rue na ngwụsị nke mgbụsị akwụkwọ. Mgbanwe dị na mini mini. Na pelargonium nke Lara Harmony, okooko yiri Roses.
A na-eji Minx mara obere nha na akpụkpọ anụ na-acha uhie uhie. Na mgbakwunye na akwụkwọ gbara ọchịchịrị, ha na-apụ apụ n'ụzọ siri ike. Varietydị nke ọ bụla nwere njirimara nke ya, ndị na-akụ ifuru nwere ahụmahụ na-anakọta mkpokọta ndị dị iche na uto na agba nke inflorescences. Pelargonium silk Swan bụ ihe na-adọrọ mmasị maka nnukwu osisi ya, nke jupụtara na mpempe akwụkwọ osisi na ifuru dị ọcha.
Dị Mkpa! Ọ bụghị mgbe niile na ụlọ ahịa ifuru na-ere ndị maara omenala ha. Mgbe ịzụrụ, ọ ka mma ilekwasị anya na aha Latin.
N'ime osisi dị n'ime ụlọ ị nwere ike ịchọta:
Pelargonium Lara Obi ụtọ na nha nha, inflorescences na fuchsia na ọcha isi. Na mgbakwunye na ịma mma, a na-eji ụdị ụda ala dịgasị iche mara ya. Pelargonium Lara Delight na-amasị ndị na-akụ ifuru nke hụrụ agba mara mma ma mara mma n'anya. A na-ahọrọ ahịhịa ndị buru ibu ma ọ bụ ụda ndị dara ụda maka ubi ahụ.
Enwere ike ịchọta Pelargonium Yu Disco n'ọnọdụ ndị a na-adịghị ahụkebe, ọ bụghị nke ndị a ma ama. A na-ese Petals na ụda dị nro pink, a na-anakọta buds na inflorescences nke anwụ anwụ. Okirikiri ụdị mkpụrụ osisi dị okirikiri dị n’elu ebe dị elu ma pụọ ​​n’ihe ọkụkụ ndị ọzọ.
Pelargonium Yu Princess - mara nke nwere pink dị ka inflorescences nwere obere pink tinge. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, akụrụngwa ya na-abanye n'ime akpa, na-enye ya ọdịdị pụrụ iche.
Pelargonium Yu Kathak nwere agba pụrụ iche nke mpempe akwụkwọ: agba agba aja aja na-edo edo n'okpuru. Terry inflorescences, ya na ụda olu na-acha uhie uhie. Nnukwu ọhịa na-adịrị ndụ mfe ịkwachaa.
Dị Mkpa! N'ime ụlọ ahịa ifuru, a na-ere ihe ọkụkụ dị iche iche (Yu Gamayun Pelargonium, Yu Lilac Fog, Yu Sirin), mana ndị ọrụ anaghị ekewa ha. N'ihi nke a, onye na-azụ ahịa na-enweta ngwakọta geraniums nke agba dị iche iche.
Nlekọta ụlọ nke ụlọ nke pelargonium zonal
Maka nlekọta geranium zones n'ụlọ chọrọ ihe pụrụ iche. Na-enweghị ya, osisi ahụ ga-ajụ ọ bụghị naanị oge ntoju, kamakwa itolite.
Ọkụ na ọnọdụ okpomọkụ
Pelargonium Elnaryds Hilda na ụdị ndị ọzọ nke usoro Elnaruds
Pelargonium ite Yu Bolero ka edobere n’ime ụlọ ebe ọkụ na-enye ọ andụ ma oge elekere nke elekere 16 ma ọ bụ karịa. N'oge ọkọchị, a na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dị na +20 ℃, n'oge oyi - +15 ℃. Igwe mmiri na-egbusi ike nwere ike ịkpasu ọdịda nke peduncles.
N'oge ọkọchị, a na-agba mmiri ahụ mmiri ugboro atọ n'izu, n'oge oyi, a na-ebelata ego ole a na-agba ya mmiri ka ọ bụrụ ihe ezi uche dị na ya.
Ozi ndị ọzọ! Osisi ahụ na-anabatụrụ ntakịrị ụkọ mmiri ma ọ gaghị achọ spraying.
Maka ifuru jiri ngwakọta zuru ụwa ọnụ site na ụlọ ahịa ma ọ bụ tinye na nha ihu igwe, peat na ala ahihia. N’oge ahihia, o kwesiri inye nri mmanu nwere ihe ndi n’enye mmanu n’enye mmanu nke nwere mmanu abuo. A na-etinye fatịlaịza kwa ụbọchị iri na anọ.
Dị Mkpa! Ngwakọta na nitrogen enweghị ike iji mee ka ala ahụ jupụta - ọ na - eme ka uto na-arụ ọrụ nke oke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ngwunye Tank ifuru
Mpempe ahụ kwesịrị ịkarị ogo nke mgbọrọgwụ akpụ site na 1 cm.
Osisi ifuru ga-achọ iwepụ, mgbe ngwụsị nke oge ifuru, alaka ya na-ebelata site na ụzọ atọ nke ogologo. Uzo a na –eme ka uto nke akuku puta. Runkpacha osisi na-enyere aka na-etolite kọmpat osisi, a na-ejikwa mkpụkọ mee ihe maka ịgbasa.
Njirimara nke ahihia
Imirikiti ụdị mmemme na-ewe site n'oge opupu ihe ubi ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Na njedebe ya, oge ezumike na-abịa, osisi ahụ na-abanyekwa ebe ahụ ruo ọnwa ikpeazụ.
Dị Mkpa! Ọtụtụ ndị amateurs na-atụ aro, usoro oge mgbakwunye okooko osisi bụ ihe a na-achọghị. Nlekọta ihe wuruwuru na-eduga n'inwe nnukwu osisi.
A na-ebelata elekere ụbọchị ìhè n’oge awa ka ọ bụrụ awa iri na abụọ, a na-ebelata ugboro ole mmiri na ala ga-ebelata. N'ime oge a, a na-eburu ibu. Enweghị ike ịghagharị ya ma nye ya nri.
Ka ọ na-erule Machị, awa anwụ na-amụba, dịkwa ka ọnụ ọgụgụ ịgba mmiri. N'otu ọnwa ahụ, a na-arụ ọrụ nlekọta ọkọlọtọ maka pelargonium, ya na akwa akwa na ntughari (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa). Nkwadebe maka oge ezumike na-amalite na Septemba.
Pesdị na ụdị okooko osisi
Ihe niile nke zones pelargonium kewara ekewa n'ime ọgbakọ atọ:
Nkewa dabere na ọnụ ọgụgụ petals. Imdị atụ kachasị mara mma nwere iberibe 8 ma ọ bụ karịa. Dabere na nkewa nke abụọ, nkewa nke na enyere anyị aka ịmata ọdịiche dị na otu:
Mara! Ezigbo mmasị dị iche iche bụ oge ntoju dị ka cacti nkịtị.
Wzọ iji gbasa ifuru ma ọ bụrụ na emechara ya
A na - enweta mkpụrụ ọhụụ site na mkpirisi ma ọ bụ usoro mkpụrụ. Onye ọ bụla nwere uru na ọghọm ya.
Ọ na-ezo aka na usoro kachasị mfe. Ọ pụtara ịnata mkpo, kpochapụ ha na ala nke ahịhịa ma zigara ya n'ime iko. Gardenersfọdụ ndị na-elekọta ubi na-ahọrọ ịgha mkpụrụ ozugbo na ala kpọrọ nkụ, yana omimi nke cm 3. A na-atụ anya ọdịdị nke usoro mgbọrọgwụ n'ime izu ole na ole.
Usoro a na - enyere aka n’ịgha ụdị ụmụ obere, mana ọ na - ewe oge. A na-anakọta mkpụrụ sitere na peduncles, mgbe e guzobere bolls akọrọ. A na-arụ ịkụ mkpụrụ n'oge opupu ihe ubi:
N'ikike ọ bụla, ha na-akụ otu ụzọ;
kpuchie ya na plastic ma ọ bụ iko;
oge na-emeghe ma wepu mmiri ekpokọtara.
Dị Mkpa! Mkpụrụ izipu mbụ ga-apụta n’ime otu ọnwa. Mgbe ha tolitere, a na-atụgharị ha ka ọ bụrụ nnukwu ite.
Nsogbu na-eto eto, ọrịa na ụmụ ahụhụ
A na-ekpebi ọnụnọ nke ọrịa site na ọnọdụ zuru oke nke ọdịbendị na ọdịdị ya. Fọdụ ihe atụ nwere ike igosipụta akwụkwọ nri na-acha odo odo na nkụ ha, akpọnwụọ ha ma ọ bụ nke na-akụda ha, nke nwere ike pụta nnukwu nsogbu:
ntụ isi awọ na akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egosi mmepe nke agbaze agba ntụ, isi mmalite nke mmebi bụ ịwụcha mmiri nke mkpụrụ nke mkpụrụ;
A na - egosipụta ọkụ na - ezighi ezi site na ịdọpụ ụdọ na enweghị ọnya;
apịtị na-acha ọbara ọbara na-apụta na obere okpomọkụ.
Mmegide nke ụmụ ahụhụ nje na-enwe mgbaàmà nke ha:
Spider mite - na-awakpo ọdịbendị na mmụba ikuku dị n'ime ụlọ ahụ. E gosiputara ya site na ihicha ahihia ahihia na obere ọla ọcha na akụkụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Mealybug - kpebisiri ike site na ịcha ọcha na efere ahụ. Mwakpo ahụ pụtara na ịka ájá mgbe niile.
Whitefly - dị ka obere urukurubụba. Ahụsa ahụ ngwa ngwa mejupụtara ógbè ngwa ngwa ma kpuchie ahịhịa niile.
Dị Mkpa! Ihe nchoputa nke ọnya choro usoro ọgwụgwọ iji zoputa ifuru ahuru oria.
A na-eji ngwọta Fungicidal agwọ ọrịa pathologies. A na-emegharị ihe ọkụkụ ahụ n'ime akpa ọhụrụ nke nwere mkpụrụ ọhụụ, tupu usoro ahụ, a na-ewepụ ebe niile emetụtara ma fesa ya na ntụ ntụ carbon rụọ ọrụ.
Ọgụ megide ụmụ ahụhụ nje na-agụnye n'iji akụkụ ahịhịa ndụ na-eji paụlụ bekee na-enwe ncha ncha ma fesa ya na ndị ọrụ ahụhụ. A na-eme ihe omume ahụ ọtụtụ oge, ruo mgbe mbibi zuru ezu nke ụmụ ahụhụ.
Pelargonium esighi ike ilekọta ya, dabere na iwu, ọ ga-atọ ya ụtọ na buds na-egbuke egbuke nke na-anaghị ada mbà ọnwa isii.